Saldhigyo Ay Baneeyeen Ciidanka Dowladda Oo AlShabaab La Wareegtay - Awdinle Online
Saldhigyo Ay Baneeyeen Ciidanka Dowladda Oo AlShabaab La Wareegtay
Deegaano hoostaga degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe Wararka laga helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamo ka tirsan millateriga Soomaaliya ay isaga baxeen Xarumo ay ku lahaayeen Ceelka geeloow iyo Raaxooy oo ku dhow deegaanka Qalimow.
Al-Shabaab oo ku sugnaa meel aan ka fogeen deegaanka Qalimow ayaa waxaa ay sheegteen inay la wareegeen Saldhigyadii ay baneeyeen Ciidamada Dowladda ee Ceelka geeloow iyo Raaxooy.
Ilaa iyo lama oga sababaha ay ciidamada dowladda u baneeyeen deegaannada Ceelka geeloow iyo Raaxooy,ciidamadaas oo sugayay amniga wadada u dhaxeysa Magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo dhowr jeer weeraro kala duwan ay ka dhaceen.
Deegaanka Qalimow oo 30km dhinaca Waqooyi ka xiga degmada Balcad ayaa ku yaalla bartamaha wadada xiriirisa Magaalooyinka Jowhar iyo Balcad,waxaana la sheegay in Ciidamadii ku sugnaa Aaga degaankaasi ay isaga baxeen.
Saraakiisha taliska qeybta 27aad ee Ciidamada xoogga dalka weli kama hadlin sababta ay Ciidamada saldhigyadaasi u baneeyeen, iyada oo saldhigyo kale ay ku yaalaan degaannada kale sida Gololeey.
Waddada isku xirta Jowhar iyo Balcad ayaa u go’an amni darro darteed,waxaa ku badan weerarrada tooska ah iyo Miinooyinka,waxaana dhamaan xubnaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle ku tagaan Jowhar diyaarad kaliya.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa horay u sheegay in Al-shabaabka looga adkaaday Gobolka shabeellaha hoose ay u wareegeen Gobollada Hiiraan iyo Shabeelllaha dhexe islamarkaana dhib badan ku hayaan dadka Maamulka Hirshabeelle.
Dowladda Federaalka ah iyo Howlgalka AMISOM ayuu ka codsaday in ay ka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka ah AL-shabaab.
Previous articleDagaal gobalka bakool ku dhemarey Ciidanka Dowlada Iyo Al shabaab
Next articleGeneral Muhoozi of UPDF sends a strong warning to Foreign and Internal enemies of Uganda